राजा वीरेन्द्रको मृत्युका बारेमा भविष्यवाणी गरेका यि चर्चित ज्योतीले गरे राष्ट्रका बारेमा फेरी अर्को भविष्यवाणी – Complete Nepali News Portal
राजा वीरेन्द्रको मृत्युका बारेमा भविष्यवाणी गरेका यि चर्चित ज्योतीले गरे राष्ट्रका बारेमा फेरी अर्को भविष्यवाणी
March 23, 2017	36,329 Views
बल्ल खबर बाहिरियो !! कहाँछन त राजा बिरेन्द्रका नातिनीहरु !! यो पनि भिडियोमा हेर्नुहोस
काठमाडौं । बेलाबेलामा विभिन्न राष्ट्रियस्तरका भविष्यवाणी गरेर चर्चामा आउने ज्यो. दीपक सुवेदीले नयाँ वर्ष २०७४ को पूर्वसन्ध्यामा फेरि अर्को भविष्यवाणी गरी आमसर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । अल्लि अनौठो प्रकृतिको भविष्यवाणी गर्ने गरेका सुवेदीको धेरै भविष्यवाणीहरू पुग्ने गरेको पनि सञ्चारजगतलाई थाहा छ । उनले प्राय यस्ता भविष्यवाणीहरू सञ्चारमाध्यमबाटै गर्ने गरेका छन् । २०७३ को पहिलो दिन सगरमाथा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डलाई पार्टीको नाम एकिकृत नेकपा माओवादी नफापेको सुवेदीले बताएका थिए । लगत्तै एक महिना पछि प्रचण्डले पार्टीको नाम फेरेका थिए र त्यसको केही समय पछि उनी प्रधानमन्त्री पनि भए ।
२०६२÷६३ को आन्दोलन पछि भएको शान्तिसम्झौता गलत समयमा भएको र सो सम्झौतालाई आधारमानेर बनेको राजनीतिक संयन्त्रबाट निकास ननिस्कने तथा पहिलो संविधानसभाले संविधान नदिई अवसान हुने सुवेदीले ठोकुवा गरेका थिए । संविधानसभाले संविधान दिननसक्ने कुरामात्रै नभएर राजनीतिक संयन्त्रबाट निकास ननिस्कने भन्ने उनको भनाई अनौठो थियो । राजनीतिक क्षेत्रले निकास नदिए राजनैतिक निकास कसले दिन्छ ? वाईघात कुरो जस्तो पनि लाग्थ्यो । तर, भयो त्यस्तै । राजनीतिक क्षेत्र पाखा हटेर प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बन्नपुग्यो ।
हामी नेपाली संयमित र धैर्य रहनुपर्छ । पशुपतिनाथले विगतमा जस्तै शेभलेण्डिङ्ग गराउने छन् । सबैले आआफ्नो धर्मको, कर्तव्यको पालना गरौं । सकारात्मक भावना बढाऔं सुवेदीले भन्छन् । यहाँले ज्यो. दीपक सुवेदीको अन्तर्वार्ताको भिडियो जस्ताको तस्तै हेर्न सक्नु हुनेछ । युट्युबबाट
– पुर्बेली न्युज बाट